Muqdisho: 7 Qof oo Ku Geeriyootay Roobabkii Xalay Ka Da’ay Caasimadda Dalka – Goobjoog News
Roobab xooggan oo xalay caasimadda ka day’ay islamarkaana socday kudhawaad saddexx saacadood ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, burbur hantiyadeed iyo barakac ay bilaabeen dadkii uu saameynta ku yeeshay roobabkii mahiiganka ahaa.
Inta la ogyahay 7 qof oo 6 ka mid ah ay ahaayeen isku qoys ayaa la sheegay inay ku naf waayeen daadadkii kadhashay roobabkii xalay 6 lixda ruux ee isku qoyska ahayd ee geeriyootay ayaa 5 kamid ah waxa ay aheyeen caruur halka shaqsi lixaad ay ahayd hooyo da’ ahayd
Wararka ayaa intaas ku daraya labo qof oo qura oo qoyskaasi kamid ahaa ay ka badbaadeen musiibadaasi labada badbaaday ayaana ah aabaha qoyskaasi iyo hal caruur ah.
Dhinacakale qoysas danyar ah oo degan guryo cooshaddo ka sameesnaa ayaa roobabku u galeen guryahooda inkastoo dhimasho aysan jirin balse kistii yareed ee cunno ay u haysteen ayaa waxaa la tagay daadadkii xalay guryahooda ugu soo galay waxa ayna sheegeen in aysan heysan wax ay ku afuraan xilligaan.
Sidoo kale mid kamdi ah dadka deegaanka ayaa sheegay in uu idhiihisa ku arkay gacmiisanaha uu ku qabtay carur ay biyo qadeen xilii dambe ee xalay waxa uuna dalbaday in dadkaas wax lala soo gaaaro.
Guddoomiyaha halka ay wax kadhaceen ee degmada Wadajir ayaa soo kormeeray dhamaan waaxyaha degmada ee dhibka uu gaaray waxaana guddoomiyaha uu carro buuxin kus ameeyay jidadkii uu burburiyay daadadka kadhashay roobabkii xalay ka da’ay magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in tallaabadaan oo kaliya aysan kufilneen dadkaan danyarta ah.
Xalay ayaa roob mahiigaan ah waxa uu ka da’ay degmooyinka gobalka Banaadir uu ka koobanyahay iyada oo saameynta uu geystay roobkaasi kaliya ay ku waxyeeloobeen dadka danyarta ah ee aan haysan hooy fiican oo ay ka galaan daadadka roobabka xilli laguda galay roobabkii gu’ga.